China Dibromomethane Ukukhiqiza neFektri | Ukuxubeka
CAS CHA: 74-95-3
Ifomula Yamamolekhula: CH2Br2
Isisindo samangqamuzana: 173.83
Ukubukeka: Uketshezi olungenambala olungenambala
Okuqukethwe: ≥ 99%
Iphuzu lokuncibilika - 52oC
Iphuzu lokubila 96-98oC (kuvuliwe)
Ubuningi 2.477g / mlat 25oC (kuvuliwe)
Ubuningi be-vapor 6.0
Ingcindezi ye-Vapor 34.9mmhg (20oC)
Inkomba yokubonisa engu-N20 / d1.541 (kuvuliwe)
Iphuzu le-Flash 96-98oC
Ukusetshenziswa okuyinhloko: njenge-intermediate ye-pesticide, I-Dibromomethaneyiyona nto eyinhloko eluhlaza yokwenziwa kohlobo olusha lwe-high-efficiency, i-wide spectrum fungicide, kanye nezinto zokusetshenziswa zama-aconicides amakhulu we-tonnage. IDibromomethane iyi-retardant enhle yelangabi. Ukungeza iDibromomethane ku-polymer kunganciphisa ngempumelelo ukushisa komlilo kwamapulasitiki.
Ingasetshenziswa njengempahla eluhlaza yokuhlanganiswa kwe-organic, i-solvent, i-refrigerant, i-flame retardant ne-antiknock agent, i-disinfectant ne-disinfectant kwezokwelapha.
Ukwelashwa okuphuthumayo kokuvuza: khipha ngokushesha izisebenzi endaweni evuzayo engcolisiwe ziye endaweni ephephile, zihlukanise futhi unqande ngokuqinile ukufinyelela kwazo. Nquma umlilo. Kuphakanyiswa ukuthi abasebenzi bezokwelapha eziphuthumayo kufanele bagqoke okokuzenzela okuphefumulayo okuphefumulayo kanye nezingubo zokuvikela umlilo. Sika umthombo wokuvuza ngangokunokwenzeka ukuwunqanda ungangeni endaweni evinjelwe njengamapayipi okuhambisa indle kanye nomsele wokukhipha izikhukhula. Ukuvuza okuncane: ukuncela noma ukumunca ngesihlabathi noma ezinye izinto ezingashi. Inani elikhulu lokuvuza: yakha idike noma umbe umgodi ozongena kuwo. Mboza ngogwebu ukunciphisa ukulimala komusi. Dlulisela emotweni yamathangi noma ngomqoqi okhethekile ngepompo, usebenzise kabusha noma uthuthele endaweni yokwelashwa okulahlwayo ukuze ulahlwe.
Ukusebenza kwe-Catalytic kwe-CE Mn oksidi eyinhlanganisela yokushisa kwe-Dibromomethane: I-CE Mn oxides eyinhlanganisela nengxenye eyodwa ye-CE, i-Mn oxide catalysts yalungiswa ngendlela ye-coprecipitation, kanye nemisebenzi yabo yokuvuselela ukushisa kwe-Dibromomethane ngomsila wegesi we-PTA oxidation kwaphenywa, Ukwakheka kwe-crystal kwama-catalysts abonakala nge-H2-TPR. Imiphumela ikhombise ukuthi i-CE Mn eyinhlanganisela yama-oxide akha isakhiwo sesisombululo esiqinile esilinganayo ngenxa ye-Mn3 + engena kwi-CeO2 lattice, futhi ibe nokusebenza okuhle kakhulu kokunciphisa izinga lokushisa. Ukusebenza kokushisa komlilo kwe-catalysts ye-Dibromomethane kwakungcono kakhulu kunalokho kwengxenye eyodwa ye-CE ne-Mn oxides, Lapho ingxenyana yevolumu ye-Dibromomethane ingu-0.4% ~ 1.0% futhi i-velocity yesikhala ingaphansi kuka-24 000 H-1, ukuguqulwa kwe IDibromomethane ingaphezu kwama-95%, kanti isivuno esiphelele seBr2 ne-HBr singafinyelela ngaphezu kuka-83%
Ukupakisha: 230kg / isigubhu.
Izinyathelo zokuphepha zesitoreji: gcina endaweni yokugcina impahla epholile, eyomile nenomoya.
Amandla wonyaka: Amathani ayi-2000 / ngonyaka